Shina marindrano ambany-e fitaratra milina fanasan-damba rivotra rafitra pisolika sy mpanamboatra | Zhengxing mekanika
marindrano ambany-e fitaratra milina fanasan-damba rafitra sisin-drivotra
Structure Feature ：
1.1 Main drive dia ny fiara, ny hafainganam-pandehan'ny maotera dia fehezin'ny inverter matetika, ny fampisehoana nomerika mampiseho ny hafainganana ary ny hatevin'ny fitaratra. Roller Brush dia entin'ny motera ambony sy ambany miaraka amin'ny fehikibo misaraka, izay manana hafainganam-pandeha sy fiainana lava.
1.2 Takelaka metaly fanasan-damba sy faritra ampifandraisina amin'ny rano vita amin'ny vy vy.
1.3 Ny fantsom-pandrefesana vita amin'ny fingotra rehetra ao amin'ny masinina dia volo vita amin'ny volo (Voarara ny hifandray amina ranoka misy asidra.).
milina fanasana marindrano fitaratra
1. Structure Feature ：
1.4 Ny ampahany manasa sy ny faritra maina dia azo atsangana hatramin'ny 350mm amin'ny ankapobeny, izay azo atao tsara ny manasa sy mitazona azy.
1.5 Ny borosy dia manana borosy telo (Φ150mm). Rehefa manasa Low-E Glass: Ny borosy roa mafy ambony dia azo atsangana amin'ny varingarina ary avela fotsiny borosy malefaka iray, io dia hialana amin'ny fanimbana ny fitaratra fitaratra, izay azo natao hanasana vera ambany, fitaratra fitaratra mahazatra ary taratry ny masoandro. vera.
1.6 Misy sivana rivotra ao amin'ny efitranon'ny rivotra mitsoka. Ny vokad-pahamainana dia tsara kokoa amin'ny alàlan'ny rivotra be. Ny blower iray manontolo dia napetraka ao amin'ny atrikasa, ary afaka miakatra amin'ny faritra fanasana sy fanamainana izy io, izay mitana toerana kely.
1.7 Ny masinina dia manana antsy roa tsiroaroa, izay misy rivotra be sy vokany maina tsara.
1.8 Ny takelaka metaly amin'ny faritra hafa dia nolokoina tamin'ny loko milina ambony.
Ny sakan'ny fitaratra ambony indrindra:
2500 mm (sakany)
Ny haben'ny vera farany ambany
Ny vera matevina dia ambany noho ny 5mm, Vmax = 7m / min
Ny hatevin'ny vera dia 8mm ka hatramin'ny 12mm, V <= 3m / min
Ny hatevin'ny vera dia 15mm-19mm, V = 2m / min
Fomba hanovana ny hafainganam-pandehan'ny fiara lehibe:
fanaraha-maso hafainganam-pandeha miovaova;
Haavo latabatra miasa
Previous: mandeha ho azy dehydrator fitsaboana rano sentrifugal ara-batana
Manaraka: milina fitotoana fitotoana poloney pensilihazo bevel OG milina fanodinana
Fanasan-damba fitaratra elektrika
Mpanasa lamba ambony vera
Fanasan-damba fitaratra indostrialy